Balungiselwe amagumbi okufundela | News24
Balungiselwe amagumbi okufundela
isithombe: lethiwe makhanyaKungemuva kokuba izinhlangano seziqede ukulungisa amagumbi esikole ngoLwesihlanu.
BEKUYINJABULO yodwa kodado basesikoleni Indlela Yabasha bebanga lika-Grade R no-Grade 1 ngemuva kokulungiselwa amagumbi abo okufundela afakwa nemifanekiso yokuhlobisa ngoLwesihlanu olwedlule mhla zingama-24 kuNcwaba (August).
Lokhu kwenziwe isikole i-Epworth School ngokuhlanganyela nenhlangano engenzi nzuzo i-African Exposure nokubambisana neThandanani.
Lezi zinhlaka ezahluke zipende amagumbi amane akulesi sikole nokungaka-Grade R kanye no-Grade 1. Baphinde balungisa nenkundla yezemidlalo yebhola lomgqakiswano (netball) ngokuthi bayipende baphinde balungise namapali.
Uthishanhloko wakulesi sikole uMnu Sbusiso Ntuli utshele i-Echo ukuthi njengesikole bajabule kakhulu ngabakwenzelwe ilezi zinhlangano. Uthe ufisa sengathi zingaqhubeka njalo zikwenze nakwabanye zingagcini nje esikoleni sabo kuphela.
Uthe: “Lo msebenzi wokuthi basilungisele amagumbi ubathathe izinsuku ezine njengoba baqala mhla zingama-21 kuNcwaba (August) baze baphothula mhla zingama-24 kuwona uNcwaba babe sebewethula ngokusemthethweni kuthina futhi esemahle.
“Sijabule kakhulu ngoba izingane zethu nazo sezizofundela emagumbini akhangayo amahle agqamile.Siswele amazwi okubonga,” kubeka yena.
UMnu Ntuli uveze ukuthi amagumbi izingane ekade zifundela kuwona bekufundeka kuwona kodwa abedinga ukukhanyiswa ukuze ezogqama avuke abe masha.